Nagu saabsan - JIAXING INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
Waxaan leenahay in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah saqafyada caagga ah iyo darbiyada darbiyada
JIAXING Warshadaha GROUP CO., LTD.waxaa la aasaasay 1998 waana soo saaraha hormuudka ka ah balaastigga (PVC / FRP / PC) saqafka iyo darbiyada darbiyada Shiinaha. Ka dib 10 sano oo horumar ah, shirkadeena waxay leedahay awood wax soo saar sanadle ah oo qiyaastii ah 6 milyan oo mitir murabac ah, waxaana loo dhoofiyay Aasiya, Afrika, Yurub, Koonfurta Ameerika, iwm, iyo In Hindiya, Cambodia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Mexico helay ammaan badan, oo gaadhay qandaraas sahay sanadle ah.
Kuu siin karaa adeegga ugu tayada wanaagsan
Maaddaama aan nahay xirfad bixiye xallin xirfad leh, waxaan si wax ku ool ah ugu xallin karnaa kuleylka-caddeynta, Acid-daxalka, gudbinta iftiinka, ka-hortagga biyaha ee macaamiisheenna. Hadday tahay macmiil cusub ama macmiil duug ah, waxaan si joogto ah ugu adeegi doonnaa macmiilka, tusaale ahaan, haddii alaabtu dhibaato leedahay, waxaa lagu beddelayaa bilaash, iyo dammaanad joogto ah. Waqtigan xaadirka ah, dhoofinta bil kasta waxay gaadhay 50 konteenar.
Waxaan bixin karnaa badeecad si ballaaran u kala duwan sida foornada saqafka dhoobada ah ee loo yaqaan 'synthetic resin', xaashida saqafka PVC, Transparent FRP sheet sheet, Polycarbonate sheet, sheet saqafka birta ah, Sandwich panel, Dhammaan alaabooyinka waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah, oo si ballaaran loogu isticmaali karo guriga la deggan yahay, bakhaarada warshadaha, guriga beeraha house qoraxda, aqalka dhirta lagu koriyo, iyo wixii la mid ah.
Sumadda JX waxay ka kooban tahay orod iyo xmitter. Micnaheeda: orodku waa isboorti. Markuu qofku ku dhex ordayo nolosha, muddo dheer oo aruurinta kadib kaliya wuxuu ogaan doonaa in masaafada ay sii fogaaneyso, aakhirkana uu si geesinimo leh u socdo sida xmitter. sidoo kale waxay ka dhigan tahay in shaqadeenu ay horay u socon karto oo macaamiisha u siin karto adeeg joogto ah iyo tayada ugu fiican.
Tan iyo markii la aasaasay, shirkadeena waxay ku sameysay horumar deg deg ah falsafada ganacsiga ee "xirfad ahaaneed, amaah, hal-abuurnimo iyo istiraatiijiyad wada-guuleysi ah"! Ku tiirsanaanta koox xirfadlayaal ah, naqshadeynta wax soo saarka gaarka ah iyo awoodaha horumarinta, alaab tayo sare leh, xalal casri adeegyo kaladuwan oo buuxa, waxaan kuu soo bandhigi karnaa badeecadaha ugu kharashka badan.
Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah ee gorgortanka ganacsiga, wada xiriirka iyo horumarka wadajirka ah!